Nei Takatendeuka uye Tichichinja Domain Yedu kuMartech.zone | Martech Zone
Nei Takatendeuka uye Tichichinja Domain Yedu kuMartech.zone
Svondo, Ndira 29, 2017 China, May 7, 2020 Douglas Karr
Izwi rekuti blog rinonakidza. Makore apfuura, pandakanyora Corporate Kubhuroka kweDummies, Ndakada izwi iri Blog nekuti zvairatidza pfungwa yehunhu uye pachena. Makambani akange asisafanirwe kuvimba zvizere nekuisa nhau kuti aburitse tsika nemagariro, nhau, kana kufambira mberi. Ivo vanogona kutepfenyura avo kunze kuburikidza nekambani yavo blog uye nekuvaka nharaunda kuburikidza nevezvenhau vezvenhau iyo yaitaridza yavo brand. Nekufamba kwenguva, vanogona kuvaka vateereri, nharaunda, uye kukurudzira.
Makambani akakwanisa kugovana ruzivo urwu kupfuura zvivakwa zvavo (nhepfenyuro), zvakadaro. Ivo zvakare vane mikana inoshamisa yekuti izwi ravo rinzwikwe pane mamwe mabhuku (yakawana midhiya). Vaviri, hongu, vane mukana wekugovaniswa (evanhu vezvenhau) kana kubhadhara uye kukwidziridzwa (vanobhadharwa midhiya. Izwi rekuti Corporate Blogging yakanga ichiganhurira, uye izwi Content Marketing vakatungamira pamusoro pemakore mashanu apfuura mukufukidza nzira idzo makambani akaendesa kuburikidza nenhepfenyuro, varidzi venhau, vezvenhau, uye vanobhadharisa masosi enhau. Sezvineiwo, anga aine rakanyorwa iro chairo bhuku asi akaridaidza Zvemukati Kushambadzira maDummies… ingadai yakamirira muyedzo wenguva. Asi izwi Blog inogumira hupenyu hwayo.
Saiti yedu saiti yakanzi iyo Martech Zone iine URL marketingtechblog.com. Ini ndanga ndichiita chinhu chimwe chete kune yangu saiti yandakanga ndaita nebhuku rangu. Izwi iri Blog kumutsa mhinduro dzakafanana. Izwi iri Blog yakanzwika yakura, yakasarudzika, uye kwete sehunyanzvi. Ini ndaireva kune saiti ichienderera ichiti chinyorwa. Vamwe vanotaura kumablog avo se digital magazini. Nekudaro, ini ndaitya domain shanduko nekuda kweese einjini yekutsvaga mvumo yandakanga ndavaka mudomain iyoyo, saka handina kumbobvira ndashinga kuimutsiridza. Kusvikira nguva pfupi yadarika, Google payakamira kuranga redirects uye yakatowedzera a domain change mashandiro mune yekutsvaga koni.
Zvaive zvakare zvakaoma kuti isu tigovane dunhu redu. Isu taigara tichifanira kutaura kushambadzira-tech-blog-dot-com uye kuperetera kune vanhu kana tichikurukura nezvazvo. Yakanga isiri duraini iyo yaingoburitsa parurimi uye zvaive nyore kududzira kune iyo URL iyo munhu aigona kurangarira nekunyora mubrowser. Martech rave indasitiri-inogamuchirwa izwi rekutengesa uye kushambadzira inoenderana tekinoroji uye mhinduro.
Ndakatsvaga ndichidzokorora-tarisa matunhu ane hukama nemartech angave aripo aive nyore kuyeuka… uye akazopedzisira aitika Martech.zone (isu zvakare tine kushambadzira. tekinoroji asi iyo yakareba chaizvo).
Kusuma Martech Zone
Isu takabatsira makambani akati wandei kuenda kumatunhu nyowani uye takatarisa masosi avo akazogadzikika nekudzoka. Yakanga iri nguva yekuti isu tiite zvakafanana saka ndakadhonza plug - mushure memakore gumi - neChishanu. Kwakanyanya kuve kutama kuri nyore chengetedza zvinhu zvishoma.
Iwe unogona kushamisika kuti kangani kushandisa kwako inotongwa zita mumaprofiles uye echitatu-bato saiti! Ini ndinofunga ndamboishandisa mumakumi ezviuru emasaiti saini uye kunyoresa nzvimbo. Uku kwave kuvhura maziso chaiko!
Yedu ekare maratidziro uye domain yaive kumashure kwe SSL chiiti. Nekuda kweizvozvo, isu hatina kukwanisa kungokanda ma alias kumusoro kwedu saiti uye kuendesa vanhu zvakare. Isu taifanirwa kutora saiti yechipiri neyedu dura rekare, kuisa chitupa, uye kuita zvachose kuendesa kunharaunda nyowani. Tinogona zvakare kuda kuita izvi nemifananidzo sezvo isu tine mamwe maRL akataurwa kuburikidza neemail uye nhare mbozha. Ndichiri kucherechedza zvinoitika.
Takarasikirwa nezvose zvedu social link share kuverenga. Ini handisi kunetseka zvakanyanya nezve izvi, uye isu takamira kumisikidza kuverengwa kwenhengo. Ndiri kushamisika kuti hapana imwe yekupfupisa mapuratifomu uye ezvehukama mapuratifomu anotevera chinongedzo sezvinoita injini dzekutsvaga. Zvinotaridza sekutevera ma URLs chingave chinhu chakanaka kurongedza yavo data.
Saka ipapo unayo! Isu tave kuyananisa zvese zveedu zvivakwa uye nzvimbo dzekudyidzana kuti tiise nyowani nyowani… yedu Martech kuburitswa, kwedu Martech Zone Kubvunzurudza Podcast, uye yedu yeMartech nzira dzekudyidzana (ona kuti isu akachinja Twitter pasina kurasikirwa nevateveri)!
Farira Martech Zone uye mhoro Martech Zone!
Tags: brandingchange domainkubatanidzwa kubhurogira madummiesshanduko yedunhuKushambadzira Tech BlogMarketing technology blogmarketingtechblogmartechmartech blogmartech zonezvachose redirectseo
Jan 29, 2017 na8:08 PM